Ndekupi iTunes inochengetera mafemwa eiyo iPhone, iPad? | IPhone nhau
Paul Aparicio | | iTunes, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kubva pane yekutanga vhezheni ye iPhone OS, mafaera kana firmware yeiyo iOS chishandiso ine yekuwedzera .ipsw (iPhone Software). Imwe nzira yekutsanangudza chinonzi .ipsw faira ndeyekutaura kuti ndiwo diski mifananidzo yeanoshanda sisitimu yeIOS. Mune mamwe maMac zvirongwa, iyo diski mufananidzo i .dmg, mune mamwe mapurogiramu mifananidzo iyi inosvika mu .iso fomati uye, kunyangwe zvisiri kuzonyorwa padiski, idzi mhando dzemifananidzo yeiyo iPhone, iPod Touch kana iPad ndiwo mafaera e .ipsw.
Se firmware kana inoshanda system zvavari, .ipws mafaera anozodiwa kuti uvandudze kana kudzorera iyo iPhone, iPod Touch kana iPad kubva kuTunes, saka tinogona kungovhura neyakajairwa Apple mutambi, zvese paMac uye Windows makomputa (haisipo yeLinux). Nezvo izvi zvatsanangurwa, kuchine zvakawanda zvekutsanangura uye mune zvese izvi posvo isu tichaedza kugadzirisa kusahadzika kwako kwese maererano nemafirmwares eIOS zvishandiso.
1 Kwokuchengetedza iTunes firmwares
2 Nzira yekuvhura IPSW muTunes
3 Maitiro ekuziva kana Apple ichiri kusaina iyo iOS vhezheni
4 Kwatinotora chero vhezheni yeIOS ye iPhone kana iPad
5 Kwatinotora download yazvino vhezheni yeTunes
6 Maitiro ekuvandudza iTunes
Kwokuchengetedza iTunes firmwares
Sezvo akasiyana masystem ekushandisa ari, apo iTunes inotora firmware ye iPhone, iPod Touch, kana iPad, zvinoita saizvozvo mukati nzira dzakasiyana zvinoenderana nekuti tatozvidhodha paMac kana Windows. Iyo nzira ichave inotevera:
~ / Raibhurari / iTunes / iPhone Software Kugadziridza
Kuti uwane iyi folda, tinofanirwa kuvhura iyo Finder, tinya pane iyo Endai menyu uye pfuurirai ALT kiyi, iyo ichaita iyo Library.
C: / vashandisi / [Username] / AppData / Kutenderera / Apple Computer / iTunes / iPhone Software Ongororo
MuWindows mafolda achavanzwa, saka isu tichafanirwa kugonesa "Ratidza zvakavanzika maforodha" kana zvakapusa teedzera uye unama nzira mune kero bar yeiyo File Browser.
Nzira yekuvhura IPSW muTunes
Kunyangwe mafaera e .ipsw ari eTunes chete, haizovhurike otomatiki kana tikabatirira pavari kaviri. Kuti tivhure ivo tichafanira kuita zvinotevera:
Isu tinovhura iTunes
Tinosarudza chimbo chedu kubva kumusoro kuruboshwe.
Uye apa ndipo panouya chinhu chakakosha: tinodzvanya ALT kiyi uye tinya Dzosera kana Gadziridza.
Isu tinotsvaga iyo .ipsw faira uye tinogamuchira.
Nzira yekuvhura IPSW faira pane Mac
MuWindows maitiro acho anenge achiteerwa, nemusiyano chete watinofanira kutsiva kiyi ye ALT na kusuduruka (tsamba huru). Kune zvese zvimwe zvinhu, maitiro acho anoenderana neaya eMac.
Maitiro ekuziva kana Apple ichiri kusaina iyo iOS vhezheni
Kunyangwe chiri chokwadi kuti muActualidad iPhone isu tinowanzozivisa kana varega kusaina iOS vhezheni, ichokwadi zvakare kuti isu tingangoda kuziva mamiriro eiyo vhezheni yatakaburitsa chinyorwa kwenguva yakareba. Nzira yakanakisa yekuziva kana Apple ichisaina iOS vhezheni ndiyo inotevera
Ngatiendei kune webhusaiti ipsw.me
Isu tinosarudza iyo firmware yeyedu kifaa
Isu tinoratidza iyo firmware menyu uye, muchikamu chimwe chete ichocho, isu tichaona mune green kana iyo vhezheni yeIOS ichiri kusainwa. Hazvigone kuve nyore.
Pane iyo webhusaiti isu tinogona zvakare kuwana iyo "Signed Firmwares" chikamu kana zvakananga nekudzvanya pa Iyi link. Kamwe pane iro peji rewebhu, isu tinongofanirwa kusarudza chishandiso chedu uye tarisa kana Apple ichiramba ichisaina iyo vhezheni inotifadza.
Kwatinotora chero vhezheni yeIOS ye iPhone kana iPad
Iyo yakanaka kwazvo uye yakagadziridzwa webhusaiti nguva pfupi yapfuura yakavharwa kubva kwatinogona kurodha chero firmware kana Apple inoshanda sisitimu, pamwe nekutsvaga kana firmware ichiri kusainwa. Chero zvazvingaitika, kuwedzera kune webhusaiti yapfuura, isu tinogara tine yakasarudzika uye nyore kurangarira sarudzo ye getios. Zviri nyore kuyeuka nekuti i "tora iOS" muChirungu (Get iOS) .com. In getios.com tichava nezvose mafemu atinogona kuda. Muchokwadi, kune zvimwe zviripo izvo zvisisiri kusainwa, saka zvine chokwadi che100% kuti tichakwanisa kudhawunirodha chero firmware ye iPhone, iPad, iPod Touch uye Apple TV inoenderera ichisainwa.
Kwatinotora download yazvino vhezheni yeTunes
PaMac, iTunes yakaiswa nekusarudzika. Chero zvazvingaitika, tinogona kugara tichiibvisa nekukanganisa kana nechimwe chikonzero, chatinofanira kuisazve. Kune izvi, zvichave zvakakwana kuti isu tiende ku iTunes webhusaiti yepamutemo uye ngatiitei download. Iyo webhusaiti imwechete inoshanda kune ese Mac neWindows uye ichatipa kudhanilodha yeimwe kana imwe vhezheni zvichienderana nesystem yatinoshanyira webhu.
Kana tichida kurodha pasi imwe vhezheni, isu tinongofanirwa kupuruzira pasi uye sarudza "Tora iTunes yeWindows" yeWindows kana "Tora iTunes yeMac" kurodha vhezheni yeOS X.
Rangarira kuti yakakosha kwazvo gadziridza iTunes yekuisa yazvino vhezheni dzeIOS pane yedu iPhone kana iPad, saka, isu ticha tsanangura maitiro anoitwa pazasi.
Maitiro ekuvandudza iTunes
Kana isu tichida kushandisa chiitiko chitsva kana kuona shuwa tiri kushandisa iyo yazvino vhezheni ye iTunes, isu tichafanirwa kutarisa kana tiri kushandisa iyo yakagadziridzwa vhezheni. Heano maitiro ekuvandudza iTunes pane ese Windows uye Mac:
Kuti uvandudze iTunes paMac, ingovhura iyo Mac App Store uye wopinda iyo yekuvandudza chikamu. Kune rimwe divi, kana isu tine otomatiki zvigadziriso zvakaitwa, isu tinogashira chiziviso chekuti kunatsurudzwa kunowanikwa. Kana isu tikabvuma chiziviso, chicha dhawunirodha uye chiise icho otomatiki.
Kana tichida kugadzirisa iTunes muWindows zvakare inoti inovandudza otomatiki asi, sezvo ini ndisingazvishandise zvakanyanya, handina chokwadi zvachose. Chandinoziva ndechekuti kana tikavhura iTunes uye paine imwezve yakagadziridzwa vhezheni, isu tinogashira ziviso ichatiendesa kuwebhu kudhawunirodha vhezheni itsva yeApple media player.
Ndinofunga ndizvozvo chete. Ndinovimba ndanga ndiri wekubatsira kwauri uye kuti hauchisina kana kusahadzika kwakabatana nemafaira e. Kana zvisiri, pane chero chinhu iwe chaungafarire kuziva nezve firmware yeIOS?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Iko iTunes inochengetera kupi firmware inotorwa kubva ku iPhone, iPad?
Chekutanga pane zvese, makorokoto pawebhu,
Chandakakwanisa kunzwisisa apa ndechekuti kana ndine mumwe wandinoshanda naye pamwe nefemu 312 yakachengetwa pc yake, ndinogona kutsiva yangu 313 ndoisa yese.
Enrique Benitez akadaro
Izvi CHETE zvinoshanda kudzivirira kuti utorezve iyo faira kubva paInternet, asi kuti ubate zvakananga kubva pakombuta yedu (kana iTunes yakamboitora pasi).
Pindura Enrique Benítez
Ndatenda kwazvo, mubvunzo wakagadziriswa !!
Kwaziso ini ndinoita iyi nhanho ini ndinoisa nzira mune inoongorora uye ini ndinowedzera mushandisi wangu uye haigonezve Ndokumbirawo mundibatsire ndichaikoshesa mumweya wangu. Ndine windows 7 yekumba premium
Pindura kune elphoneix
Ngatione, yangu iTunes yakadzora iyo 4.2.1 yekuvandudza, pane yangu ipod ruzivo rwunoita senge ndinarwo ... asi ndobva ndatevera nzira iyo yawakandipa uye hapana chinhu ...
Ini ndatoedza zvese, uye ini handisi kuwana iyo firmware yeangu iphone 3g .. Ini ndoda kuibrowser asi isina iwo mafaera handikwanise, ndinoda rubatsiro!
Wakatomisikidza sarudzo yekuratidza maficha akavanzika mumawindows? Ini ndinofunga iro rinogona kunge riri dambudziko… ..iri mune yakarongeka, dhairekitori uye sarudzo dzekutsvaga, maona, uye unofanirwa kuisa sarudzo yekuratidza mafaera, maforodha akavanzika uye madhiraivha
garacias ndanga ndave kutowana iyo faira
Kutenda neruzivo, zvaive zvinobatsira ...
Ndinokutendai zvikuru, mubvunzo wakagadziriswa
Ndakanga ndiine hope dzekugadzira sangano rangu, asi ini handina kuwana mari inokwana mari yekuzviita. Tenda Mwari mumwe wangu akakurudzira kutora zvikwereti zvebhizinesi. Ipapo ini ndakagamuchira iyo pfupi pfupi chikwereti uye ndikazoona yangu yekare kurota.
tsika yekunyora akadaro
Kuti vawane nhau nezve iyi yakanaka posvo, vadzidzi vanotenga yakanyorwa yakanyorwa yenyaya uye yechinyakare essay pamapepa ekunyora masevhisi. Asi mamwe mapepa ekunyora mapepa anopa rondedzero kunyora nezve ino yakanaka posvo.
Pindura kutsika kunyora
mapepa mapepa akadaro
Iwe wakanyora ruzivo rwepamusoro kubatsira vadzidzi vasina ruzivo nebasa ravo rekunyora mapepa ekunyora, ndinofungidzira. Kunyangwe iro basa rekunyora bepa raisazove nekwanisi yekuita yakadai yakakurumbira rondedzero.
Pindura kumatemu etemu
Ndinokutendai zvikuru, chokwadi ndechekuti ndakanga ndatoitsvaga kare uye handina kumboiwana
Ini handina iyo iPhone Software Updates dhairekitori muWindows XP.
Kutenda kukuru- !! Zvakandibatsira zvakanyanya !! Hongu ndakaiwana uye iwe wakandichengetera maawa maviri nekuirodha pasi zvakare
Pindura kuLa BAndis
Mhoroi, maita basa kwazvo, ruzivo rwenyu chinhu chinokosha.
Kune avo vasina kuoneka dhairekitori, pamwe ivo vakaviga.
Kurudyi tinya pakutanga (iyo windows logo mukona yezasi kuruboshwe)
enda kumahwindo ekuongorora / zvinyorwa / kuronga / kutarisa uye ipapo gonesa sarudzo yekuratidza mafaira akavanzika uye maforodha.
Pindura kuna joselo.82
C: \_ Users \_ COMPUTERNAME \_ AppData \_ Roaming \_ Apple Computer \_ iTunes \_ iPod Software Kugadziridza
iyi ndiyo nzira iyo ipws ye windows7 yakavanzwa nekuchengetwa asi muinjini yekutsvaga nyora zvinotevera: Software Updates uye zvinokutora iwe kune ipws dhawunorodha dhairekitori
Space mukomana akadaro
Waita basa ... Waiziva kutsanangura.Zvakatora mwedzi 1 kuti uzive
Pindura kune Space Mukomana
Mangwanani, ini handina iyo folda iripo, sezvandakaita, nekuti ma iTunes haadi kuvandudza zvekare kuIos 4 uye haana kurodha pasi chero kubva kukombuta yangu
hesi ndinokutendai zvikuru
Kana iwe usingakwanise kuiwana ipapo, unogona kuipa C: Zvinyorwa uye ZvirongwaVese VashandisiPurogiramu DataAppleInstaller Cache. Zvirinani ndakazviwana ipapo
ndatenda lok olo ini ndaida nekuchimbidza kuti ndigadzirise ipod yangu mune imwe itunes nekuti maitunes angu haakoshe hehehe ndatenda zvikuru
Pindura kuna erik
ZVIURU GRACIAAAAAS wakandichengetera maawa matatu ekurodha pasi
Jager D akadaro
NDINE DAMBUDZIKO. NDINE WINDOWSES 8. UYE ZVIMWE ZVANDINOTSVAKA, HANDIKWANISE KUZVIWANA. MUMWE MUNHU ANGANDIBATSIRA PLEASE ???…
Pindura JAGER D
ha ha ndakazviita !!!… kune avo vane windows 8 nzira yacho ndeiyi: C: UsersUserAppDataRoamingApple ComputeriTunesiPhone Software Updates
maita basa ndinozvishandira
Ini handisi kuwana iyo nzira pane mac ...
Pindura kuna Luismur8
C: \_ Users \_ COMPUTER NAME \_ AppData \_ Local \_ Apple \_ Apple Software Gadziridza
(isa cheki uone ma olcute mafaera uye maforodha)
Ndatenda machinda, mupiro wakanaka kwazvo ...
Pindura kuna Palma
Thanks ndawana ipapo ipapo 😉
ndatenda, rubatsiro rukuru
C: \_ Users \_ jorgebg \_ AppData \_ Roaming \_ Apple Computer \_ iTunes \_ iPhone Software Kugadziridza
Aripi mafaira epsw akachengetwa mukopi yemuchina wenguva? ... ini ndinoedza kuiwana, uye ini handitombozive maitiro ekuti raibhurari folda ioneke mumuchina wenguva.
Google inopa 2 GB muDrivhi kupemberera zuva reInternet yakachengeteka